သင့်စိတ်စွမ်းအားကို ဖွင့်လှစ်ပြသဖို့ နည်းလမ်း လေးသွယ် – Gentleman Magazine
သင့်စိတ်စွမ်းအားကို ဖွင့်လှစ်ပြသဖို့ နည်းလမ်း လေးသွယ်
သင့်ဦးနှောက် စွမ်းရည်ပြည့် အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ သင်ကိုယ်တိုင်ပါ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို အစာကျွေးဖို့၊ လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး အဲလိုလုပ်ရင် သင့်ရဲ့ စိတ်ပါ စွမ်းအားမြင့်လာပါမယ်။ စိတ်စွမ်းအားကို အဆုံးထိ မြှင့်တင်ဖို့ဟာ သင်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အရမ်း အရေးပါပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုောတ့ သင့်စိတ်က သင့်ကို ထိန်းချုပ်နေလို့ပါ။.
ဦးနှောက်ကို လွှမ်းမိုးတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ၊ အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ဖိအား တို့လို အရာလေးတွေ ရှိပေမယ့် သင့်ဦးနှောက်က ဘယ်လောက်ထိ လေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ကန့်သတ်မထားပါဘူး။ သင်မှာ သင် လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် အမြင့်ရောက်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီလို အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေတာတောင် လူတော်တော်များများက မအောင်မြင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့ မအောင်မြင်ကြတာလဲ?? သင့်ရဲ့ လေ့လာသင်ကြားနိုင်မှုကို တားဆီးနေတဲ့ တံတိုင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင် အဲဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ တံတိုင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ သော့တွေကတော့
၁. ယုံကြည်ချက်တွေ ပြောင်းလဲပစ်ပါ
လူတော်တော်များများက သူတို့ လေ့လာနိုင်မယ်၊ တော်လာမယ်ဆိုတာကို မယုံကြည်ကြပါဘူး။ အရေးကြီးတာက သင် မယုံရင် သင် မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင့်ယုံကြည်ချက်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ။ သင် ပြောင်းလဲနိုင်ရင် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေပါလိမ့်မယ်။ သင်ထင်တာထက် သင်က ပိုပြီး လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံလိုက်ပါ။
၂. မှန်ကန်တဲ့ အသိတရားတွေ ရယူပါ
လူတော်တော်များများက အသိတရားရနိုင်မယ့် အရာတွေဆီ မသွားကြလို့ လေ့လာသင့်ကြားမှု မလုပ်နိုင်တာပါ။ အသိတရားဟာ လူတွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အခြား အရာ အများအပြားဆီကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ အသိတရားတွေ ရယူလိုက်ပါ။ မမှန်ကန်တဲ့ စာတွေဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး။ အသိတရားတစ်ခုရရင် သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စိတ်ကို သုံးပြီး မှန်နိုင် မမှန်နိုင် သုံးသပ်ပါ။ သင့်ဘဝမှာ သုံးနိုင် မသုံးနိုင် သုံးသပ်ပါ။
၃. လေ့လာသင်ကြားလိုစိတ် ပြင်းပြပါစေ
လူတော်တော်များများဟာ အပျင်းထူတတ်ပြီး လေ့လာလိုစိတ်ကို မရှိတာပါ။ သူတို့မှာ ပြင်းပြတဲ့ စိတ် မရှိပါဘူး။ လေ့လာလိုစိတ်ရှိဖို့တော့ ဝီရိယ လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး သင့်ဘဝမှာ လက်တွေ့ အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အရာလေးတွေကို အရင် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ငွေပိုရှာနိုင်တဲ့ အသိတရားမျိုးကို လေ့လာပိုင်နိုင်လိုက်ရင် သင် စိတ်အားထက်သန် လာပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံနည်းလေးကို လေ့လာမိလိုက်ရင် ဆက်လက် လေ့လာလိုစိတ် ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်။
၄. ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့လာစဉ် ကိုယ့်ဘာသာ စည်းကမ်းချထားပါ
လေ့လာခြင်းဟာ ဝီရိယလိုပါတယ်။ လေ့လာရမယ့် ခရီးလမ်းဟာ အရှည်ကြီးပါ။ စေ့စေ့စပ်စပ် သေသေချာချာ လုပ်ဖို့ စည်းကမ်းထားပြီး လေ့လာရင် သင် အသိတရားတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။ သင် အသိတရားတွေ ရရင် သင်ဟာ စိတ်စွမ်းအားကို အဆုံးထိ ရပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင် ဘယ်အရွယ်ရောက်နေနေ လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိတ်ဟာ လေ့လာဖို့တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး လေ့လာနိုင်စွမ်းလဲ ရှိပါတယ်။ ခုအပါတ်ကစပြီးတော့ပဲ သင့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားကို လွှင့်ထုတ်လိုက်ပါတော့။
Previous: အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အကျေအလည်ပြောနိုင်ဖို့ အချက်(၅)ခု
Next: ဝိုင်နီက သင့်နှလုံးအတွက် ကောင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်း